Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/tsara.mg.aj
Proverbe Aleo ratsy tarehy ka tsara fanahy, toy izay tsara tarehy ka ratsy fanahy. [Houlder 1895 #93]
Proverbe Andro tsara ny miarim-bolana, ka soa ny tanteraka aminy, fa manantena ho feno. [Veyrières 1913 #67]
Proverbe Antananarivo no tsara trano ka Ivakiniadiana no sola vantony. [Rinara 1974 #326, Cousins 1871 #245, Rajemisa 1985]
Proverbe Antova a Sahalampona, anin-tompontany tsara; anim-bahiny mahafaty. [Samson 1965 #A86]
Proverbe Antsibe latsaka an-dobo; raha ilaozana, harafesina. [Houlder 1895]
Antsibe latsaka an-dobo: tsiriho matetika, fandrao dia harafesina. [Cousins 1871 #257]
Proverbe Antsibe tsara ofana ireo, adidy tsy mba mahadilo ; lefona tsara varombo, atomboka tsy mba milefitra ; tangen-tsara hafatra, tsy mba mena-maso mitsara. [Veyrières 1913 #616]
Proverbe Aza asiana nofin' ny lahy, ka tsara, ary ny nofin' ny vavy hampidi-doza. [Rinara 1974 #372]
Aza asiana nofin' ny lahy sy nofin' ny vavy. [Veyrières 1913 #266, Cousins 1871 #334]
Proverbe Aza manao toy ny rafozana jamba, ka aleo hateran-tsira kely toy izay homen-damba tsara. [Veyrières 1913 #1438, Houlder 1895]
Proverbe Aza ny vady an-trano no atao tsy ho zavatra, fa izay mihaingo tsara avokoa. [Houlder 1895 #1805, Veyrières 1913 #1274]
Proverbe Boka misikidy : ny tokin' aina dia tsara ihany, fa ny hasoavana tsy misy intsony. [Veyrières 1913 #1973]
Proverbe Boka nisikidianana: ny tokin’ aina dia tsara, fa ny tenany be nahafahana. [Veyrières 1913 #125, Cousins 1871 #813]
Proverbe Dihin’ i Kalavonenana : avanavany ka tsara, fanoerana anazy tsy hainy. [Samson 1965 #D8]
Proverbe Fanompoan' ankotralahy, ka ny marary manao izay ho vitany, ary ny tsara fanahy mamono masoandro. [Veyrières 1913 #371]
Proverbe Henan' ny mpitsoka miozika : ataovy tsara zara, fa vidim-pofon' aina. [Veyrières 1913 #4491, Cousins 1871 #1048]
Henan' ny mpitsoka mozika : ataovy tsara zara fa vidim-pofon' aina. [Rinara 1974 #1307]
Proverbe Ho faty, ka tsy maty tsara ihany, fa mandrovi-tsihy. [Veyrières 1913 #2856, Cousins 1871]
Ho faty ka tsy maty tsara ihany fa no mandrovi-tsihy! [Rinara 1974 #1365]
Indrindra ho faty ihany ka tsy handrovi-tsihy? [Houlder 1895 #2102]
Proverbe Hosy be rano ka mahavery bainga. [Rinara 1974 #95]
Proverbe Ho tsara mandroso, ho tsara miverina. [Veyrières 1913 #4134]
Tsara mandroso, tsara mivarina. [Veyrières 1913 #4134]
Proverbe Indro soa, indro tsara, dia ny rano avara-tanàna no androana. [Rinara 1974 #1435, Cousins 1871]
Proverbe Izay hajaina tsy ho andriana tsy akory, ary izay manaja tsy ho andevo tsy akory; ka tsara ny mifanaja. [Houlder 1895 #187]
Proverbe Izay tsara loha endrehin-drandrana. [Veyrières 1913 #2435]
Tsara loha, ka endrehin-drandrana. [Houlder 1895 #1286, Veyrières 1913 #2468, Cousins 1871 #3281]
Tsara loha ka endrehin-drandrana, be harena ka endrehin-kaja. [Rinara 1974 #4401]
Proverbe Izay tsy an' ny tena toa tsara. [Veyrières 1913 #1374]
Proverbe Jiafotsy tsara soratra ririnina : mbola tsy afa-po dia misaraka. [Rinara 1974]
Jiafotsy tsara soratra ririnina ; tsy mbola afa-po, ka misaraka. [Veyrières 1913 #5270, Cousins 1871 #1215]
Proverbe Kibo mikoraika : tompony mahalala. [Samson 1965 #K16]
Kibo mikoraraika : hianao tompony no mahalala azy tsara. [Rinara 1974 #110]
Kibo mikoraraika, ka ny tompony ihany no mahalala. [Houlder 1895 #2269]
Kibo mikoraraika, ka ny tompony no mahalala azy. [Veyrières 1913 #3255]
Proverbe Lainga tsara lahatra ka mandrobo ny mpihaino. [Rinara 1974 #1682]
Proverbe Madio volon tsokina, tsara volon’ anivona : tsara manan-takaitra. [Samson 1965 #M3]
Proverbe Mahafisaka ny lela : mijoro ny tsara. [Samson 1965 #M6]
Proverbe Mahamenatra raha tsara loha tsy endrehin-drandrana, na fotsy volo tsy endrehin-kaja. [Rinara 1974 #1849]
Proverbe Mahia nohatsaraina toa hisatra. [Rinara 1974 #1878]
Tsara mahia toa hisatra. [Rinara 1974 #4402]
Tsara mahia, toy ny hisatra. [Veyrières 1913 #1593, Cousins 1871 #3282]
Proverbe Malahelo tsara levenana, ka voninahitry ny havan--dray sy reny. [Rinara 1974 #1922]
Proverbe Mamy ny fary, fa misy faikany ; mamy n' akondro, fa misy hodiny ; ary tsara ny raozy, fa misy tsilony. [Nicol 1935 #480]
Proverbe Mamola-tehina ny osa : mampitsangana ny tsara tena. [Samson 1965 #M75]
Proverbe Manao tsara ihany andriana. [Veyrières 1913]
Proverbe Mandoka ny ratsy, manao toetr’ eso ; manaratsy ny tsara, manao volohala. [Cousins 1871 #1591]
Proverbe Maromaroa ny fiteraka fa tsy ilaozan' izay ho tsara. [Houlder 1895 #1869, Veyrières 1913 #923, Rinara 1974 #2141]
Proverbe Maro ny mpihira fa ny manga feo no izy indrindra. [Rinara 1974 #2143]
Maro no mpihira, fa ny manga feo no izy indrindra. [Cousins 1871 #1638, Veyrières 1913]
Maro no mpihira, fa ny tsara feo no fidina. [Veyrières 1913]
Proverbe Maro ny valala, fa ny ambolo no tsara soratra. [Veyrières 1913 #5100]
Proverbe Maso voan' ny sakay, ka ny sisa no tandremana tsara. [Rinara 1974 #2162]
Proverbe Matokia manenona, fa tsara kofehy hanenjanana. [Rinara 1974 #2188, Cousins 1871]
Proverbe Mena fify tahaka ny henan-kisoa tsara ritra. [Rinara 1974 #2223]
Menafify toy ny henan-kisoa ritra. [Veyrières 1913 #4520, Cousins 1871 #1700]
Proverbe Miaraka amin' ny ferena, ka ny tsara fanahy no maimbo. [Houlder 1895 #281]
Proverbe Miaraka efatra manaratsy dia, telo misy ambiny, ny tokana tsy ampy fa ny roa no tsara indrindra. [Rinara 1974]
Proverbe Midera ny ratsy : manambany tena, mankahala ny tsara : be fialonana. [Rinara 1974 #2276]
Proverbe Midera ny ratsy, mila angatra ho any tena; manaratsy ny tsara, manao balam-pom-boninahitra. [Cousins 1871 #1741]
Proverbe Mihazakazaka tratran' ny miadana. [Rajemisa 1985]
Mihazakazaka tratry ny miadana. [Veyrières 1913 #6174]
Mihevera tsara sao mihazakazaka tratry ny miadana. [Rinara 1974 #2323]
Proverbe Mihevera tsara fa ny andro iray no tsy tanty. [Houlder 1895 #1167, Veyrières 1913 #6235]
Proverbe Miorena tsara raha hiorina, fa aza manao sarin-domano. [Veyrières 1913 #3356]
Proverbe Mitavandra saimbo tsara, mangaro vary miongana. [Samson 1965 #M120]
Proverbe Nahoana no hena tsara no handrahoina ka kitay fakoina no zahana ? [Rinara 1974]
Nahoana no hena tsara no hohandroina, ka dia kitay fakoina no tadiavina ? [Veyrières 1913 #4540, Cousins 1871 #2043]
Proverbe Namono akoho tsara ihany, ka namonoam-borombe vao torana! [Rinara 1974 #2736]
Proverbe Na tsara aza ny mizara, ny hizara sofin-toho mahasanganehana. [Rinara 1974 #2772]
Proverbe Ny andevo loza tompo no tsara midina, tsy ampy ny omen' ny tompony. [Veyrières 1913 #2317]
Proverbe Ny fahamarinana no mpiaro tsara indrindra. [Veyrières 1913 #2957]
Proverbe Ny fitiavana no tsara noho ny rakitra saro-bidy. [Veyrières 1913 #5121]
Proverbe Ny hazo no vanon-ko lakana, ao ny ala naniriany. [Veyrières 1913 #2774, Houlder 1895]
Proverbe Ny hazo tsara mamoa tsara, ny hazo ratsy mamoa ratsy. [Veyrières 1913 #2962]
Proverbe Ny maharenin-janaka tsara anao no mavokely tsy miofo, ka hitiavan' ny vadinao anao ambaraka antitra. [Veyrières 1913 #1312]
Proverbe Ny mangotraka naman’ ny masaka; ny tsara antoka naman’ ny lasa. [Cousins 1871 #2327]
Ny mangotraka naman' ny masaka, ny tsara mpiantoka naman' ny vonona. [Rinara 1974 #3119]
Proverbe Ny maty no tsara levenana, ny velona no mifankatia. [Rinara 1974 #3137]
Proverbe Ny miara-komana no tsara, hoy Rainibango. [Rinara 1974 #3144, Cousins 1871 #2347]
Proverbe Ny mpanjatobe roa ray : anatiny mahazo ny trafony, ivelany milanja ny tratrany. [Rinara 1974 #3158]
Ny mpanjatobe tsara ray roa, ka anatiny mahazo ny trafony, any ivelany milanja ny tratrany. [Cousins 1871 #2354]
Ny mpanjatobe tsara ray roa, ka anatiny mahazo trafony, any ivelany milanja ny tratrany. [Veyrières 1913 #2228]
Proverbe Ny raharaha maharitra ela no tsara indrindra. [Veyrières 1913 #3290]
Proverbe Ny raharaha no lavorary : ny tenierana no tsara. [Rinara 1974 #3210]
Proverbe Ny roa no tsara noho ny iray; raha lavo, misy mpanarina. [Houlder 1895 #243]
Proverbe Ny soa filaza, ny tsara mahate-hihaino. [Veyrières 1913 #2972]
Proverbe Ny tsara no haratsina, ny halavolo ; ny ratsy no hatsaraina, voasisika. [Veyrières 1913 #4886, Cousins 1871 #2515]
Proverbe Ny tsy mana-mpananatra no ratsy, fa raha mana-mpananatra dia tsara izany. [Veyrières 1913 #6523, Cousins 1871 #2522]
Proverbe Ondrilahy tsara toetra : sady be mangy no lava hofaka; ka manatrika, matin’ ny manginy; miamboho, matin’ ny hofany. [Veyrières 1913 #2234, Rinara 1974 #3455, Cousins 1871 #2581]
Proverbe Oro tavin’ i Tsiangoana : may tsara, tsy may tsara. [Samson 1965 #O26]
Proverbe Rafozana jamba, ka aleony sira ren' ny lelany toy izay lamba tsara. [Rinara 1974 #3540]
Rafozana jamba: ny manatitra lamba tsy hitany, fa ny manatitra sira no isaotsaorany. [Rajemisa 1985]
Proverbe Raha kamboty tsara laoka, ary malahelo ary fady, dia mba isan' ny mpanan-karena ihany. [Veyrières 1913 #1039, Cousins 1871]
Proverbe Raha misy milaza azy ho amalon-javatra, ny aty kosa fintana tsara tefy. [Rinara 1974 #234]
Proverbe Raha mitsidika be. [Veyrières 1913 #6600]
Proverbe Raha mpivady tsy hifanaja, ka dia ny mianadahy mifanaja no tsara. [Veyrières 1913]
Raha mpivady tsy hifankatia, ka dia ny mianadahy mifanaja no tsara. [Veyrières 1913]
Raha mpivady tsy hifankatia: ny mianadahy mifanaja no tsara. [Rinara 1974 #3630, Cousins 1871 #2701]
Proverbe Raha vazo mitovy ihany, ahoana no hita rano. [Rinara 1974 #3678]
Raha vazo mitovitovy ihany, dia ny tsy mita rano no akariko ho vady. [Veyrières 1913 #780, Cousins 1871]
Raha vazo mitovitovy ihany, dia ny tsy mita rano no alaina. [Veyrières 1913 #1232]
Raha vazo mitovitovy ihany, dia ny tsy mita rano no tsara. [Houlder 1895]
Proverbe Raha vinanto tsara fividy ka mitondra ny matomperiny ary mivimbina ny avany, dia tsy mba vinanto fa isan-janaka indrindra. [Houlder 1895 #1852, Veyrières 1913 #1472]
Proverbe Rainiketaka maty vady : tsara ny ro anaka. [Samson 1965 #R14]
Proverbe Randran-dRenivarengina : ny tsy nanina tsara tahatry ny tsy nanina. [Samson 1965 #R25]
Proverbe Rangahy no tsara angady, ka Rafotsy no mandimandina ; Rangahy no maty fonosana, ka Rafotsy no mafana tokantrano. [Veyrières 1913 #1326]
Proverbe Ranomasina tsara tsinjovina; fanahim-bady tsara tsy hita. [Samson 1965 #R40]
Proverbe Ratsy tarehy ambinin-doza, ka mirakaraka vao tsara. [Houlder 1895 #1291]
Ratsy tarehy ambinin-doza : mirakaraka vao soa. [Rinara 1974 #3726]
Ratsy tarehy ambinin-doza : mirakaraka vao tsara. [Veyrières 1913 #1784, Cousins 1871 #2769]
Proverbe Sabakaka ambody riana : tsara toerana, fa tsy mahita tory. [Cousins 1871 #2809, Nicol 1935 #279]
Proverbe Sodifafana an-tanin-drazana: na atsipy aza mandohalika ihany. [Veyrières 1913 #6487, Cousins 1871]
Sodifafana atsipy vao mandohalika. [Veyrières 1913 #6488]
Sodifafana ka atsipy vao manongalika. [Veyrières 1913 #6488]
Sodifafana ka natsipy any an-kady vao manongalika (tsara toerana). [Rinara 1974 #3910]
Tahaka ny sodifafana : atsipy vao mandohalika. [Cousins 1871 #2965]
Proverbe Sora-damba napetaka amin’ ny maty : tsara tsy azo alaina. [Samson 1965 #S44]
Proverbe Sora-damba tran-tompony : tsara fidy loatra. [Samson 1965 #S45]
Proverbe Sosoa rano nidinan--dronono : tsara ambonin’ ny tsara. [Samson 1965 #S53]
Proverbe Tahaka ny sodifafana : nariana any an-kady, vao tsara faniry. [Rinara 1974]
Proverbe Tandroho tsara ladina no ao ka aza mitsipelika ho amalon-javatra! [Rinara 1974 #4040]
Proverbe Tanimanga voaevotra, ka miampy kely dia takotra. [Rinara 1974 #4043]
Tanimanga voahevitra ka raha miampy kely dia takotra. [Veyrières 1913 #3303, Rajemisa 1985]
Tanimanga voahevitra: miampy kely dia takotra. [Houlder 1895 #1224, Cousins 1871 #3009]
Proverbe Tanora tsara, fa antitra vao ratsy tahaka ny vero. [Rinara 1974 #4065]
Toy ny vero : tsara faniry fa ratsy antitra. [Houlder 1895 #1946, Veyrières 1913 #1868, Cousins 1871]
Proverbe Tohy vakan’ Antalaotra, tsara lahatra. [Samson 1965 #T78]
Proverbe Toy ny rano ny harena, ka tsy izay mahery mantsaka no manam-be, fa izay tsara sinibe. [Rinara 1974 #4318]
Proverbe Tolon’ aomby an-tsavoka : tsy azoazoko tsara. [Samson 1965 #T84]
Proverbe Tombo-dambo alina : mahavoa tsara, tsy mahavoa tsara. [Samson 1965 #T101]
Proverbe Totozy latsaka amy ny hero-dronono: maty, tsara fonosana; velona, fotsy volom-bava sady tsara lamba hitafy. [Cousins 1871 #3162]
Totozy latsaka amin' ny hero-dronono : maty tsara fonosana, velona fotsy volombava, sady tsara lamba fitafy. [Rinara 1974]
Totozy latsaka amin' ny hero-dronono : maty, tsara fonosana ; velona, fotsy volombava sady tsara lamba hitafy. [Veyrières 1913 #1588]
Proverbe Traotrao vandana, kibo voananto : izay tiam-bady tsara fanahy. [Samson 1965 #T128]
Proverbe Tsara didy fa misy tangozany; tsara hatsaka fa misy volony. [Houlder 1895 #2307]
Proverbe Tsara fa tsy angatra. [Veyrières 1913 #5967]
Proverbe Tsara hateloana, hoatry ny be volombava noharasana. [Veyrières 1913 #1724]
Tsara hateloana, ohatra ny be volom-bava noharasana. [Cousins 1871]
Tsara hateloana ohatra ny be volom-bava noharatana. [Rinara 1974]
Tsara hateloana ohatra ny volom-bava haratana. [Houlder 1895]
Proverbe Tsara kely, hoatry ny zanak' Inamehana. [Veyrières 1913 #1541]
Tsara kely, ohatra ny zanak’ Inamehana. [Cousins 1871]
Proverbe Tsara manitra afon' anjavidy, kitain' ny mpanjaka. [Veyrières 1913 #260]
Proverbe Tsara miankandrefana hoatry ny miaramila rombina. [Veyrières 1913 #4031]
Tsara miankandrefana sahala amin' ny miaramila rombina. [Rinara 1974 #4405]
Proverbe Tsara mim-bahiny : tsara voadonan-dananana. [Samson 1965 #T136]
Proverbe Tsara min-tambako : tsara mahamamo. [Samson 1965 #T137]
Proverbe Tsara ny miezaka fa iaraha-manana amin' ny amboa. [Rinara 1974 #4408]
Tsara ny miezaka, kanefa omban' ny amboa manana. [Houlder 1895 #1242]
Tsara ny miezaka, saingy omban’ ny amboa manana. [Veyrières 1913 #3822, Cousins 1871 #3286]
Proverbe Tsara ny tantana, fa ny rafozana no tsy enina. [Rajemisa 1985]
Tsara ny tantana, fa sangy ny rafozana no tsy enina. [Veyrières 1913 #1479]
Proverbe Tsara Ramatoa, tsara Raivo, fa i Fara manan-tombo kokoa. [Rinara 1974 #4412]
Proverbe Tsara tarehy petaka orona ka voatondro iray no tsy naha-izy azy. [Rajemisa 1985]
Proverbe Tsara volana imaso. [Veyrières 1913 #4960]
Tsara volana imaso, tahaka ny ombin' Imantasoa. [Rinara 1974 #4415]
Tsara volan’ imaso, ohatra ny ombin’ Imantasoa. [Cousins 1871]
Proverbe Tsy misy tsara feo noho ny papelika, fa midoka tena ka mahamonaina. [Rinara 1974 #307]
Tsy misy tsara feo noho ny papelika; fa raha midoka tena, mahamonamonaina. [Cousins 1871 #3548]
Proverbe Tsy misy tsara hoatry ny fanambadiana mifanaraka. [Veyrières 1913 #1347]
Proverbe Tsy tsara nify anoloana aho ka hitsako alohan' ny vazana. [Rajemisa 1985]
Interprétation malgache Enti-milaza ny tsy tokony hanaovan-javatra alohan' izay ambony na manam-pahefana noho ny tena. [Rajemisa 1985]
Proverbe Tsy tsara tsy ratsy ohatra ny andro ririnina. [Rajemisa 1985]
Proverbe Tsivohibohitr' ankizy; ka manao soa horavana. [Houlder 1895]
Tsivohibohitr' ankizy : manao soa horavana. [Veyrières 1913 #5345, Cousins 1871 #3328]
Tsivohibohitr' ankizy : vita tsara horavana, vita ratsy horavan-drahateo. [Rinara 1974 #4465]
Proverbe Vady namboarina, ka tsara amin' ny lehibe, fa any ny andro iray. [Rinara 1974 #317]
Proverbe Valam-paria tsara hatsaka : na kely aza, mitety tora-kovitra ihany. [Cousins 1871]
Valam-parihy tsara hatsaka, ka na ny kely aza mitety tora-kovitra ihany. [Houlder 1895 #1686]
Proverbe Valavala ny hataka, tambiko ny laho ; mahavoa tsara, tsy mahavoa tsara. [Samson 1965 #V10]
Proverbe Veloma, soava tsara. [Veyrières 1913 #4181]
Proverbe "Veloma, soava tsara" , tsy mahavelom-bady aman-janaka. [Cousins 1871 #3659, Houlder 1895]
Proverbe Voahangy tsara vaventy fihaingoa-mahafa-kenatra. [Veyrières 1913 #2476, Rinara 1974 #4965, Cousins 1871 #3689]
Proverbe Voalongoza lanim-panaloka : tsara manam-boho. [Samson 1965 #V72]
Proverbe Vomanga miotrika ampombo : na mba tsara ihany fa fotsy ratsy. [Veyrières 1913 #2267]
Vomanga miotrika ampombo : tsara ihany fa fotsy ratsy. [Rinara 1974 #324, Cousins 1871]
Proverbe Vorondolo mitera-boromanga ka tsara indray noho rainy. [Houlder 1895 #1895]
Vorondolo nitera-boromanga, ka tsara indray noho rainy. [Veyrières 1913 #1012]
Proverbe Voronkontsy nihoatr’ ala : levona ny raha tsara ratsy remby. [Samson 1965 #V103]
Proverbe Zanak' olon-tsy vadiana toa tsara tarehy. [Rinara 1974 #5084]